Nezvedu - Hands Off!
Ndiro timu riri kuseri kwezviitiko
Sangano rinobvisa - rega kushungurudzwa kwevana rakavambwa muna Kubvumbi 2020 na Marc C. Riebe, Christian Tweer negweta Hans Boehme uye yave ichizivikanwa sesangano risingabatsiri muSwitzerland kubva munaGunyana 25, 2020 mutero unoregererwa. Manuela Benko-Ackermann, Victoria Riebe naDaniel Julien Imo vanopedzisa bhodhi. 95% yezvipo zvinoenda zvakananga kudzivirira uye kuchengetedzwa kwevana. Nekuda kwechimiro chedu chakaonda, 5% chete ndiyo inoshandiswa kutonga uye nhengo dzese dzebhodhi vanozvipira.
Marc C. Riebe mubvunzurudzo naSüdkurier muConstance
Iyi danho rakauya nekuda kwekufungidzirwa zvisizvo neKonstanz District Court apo iyo pedophile Thomas Louis akatongerwa makore maviri ekufungidzirwa, kunyangwe akabvuma kushungurudzwa pabonde nezvevachiri kuyaruka uye kuve nemifananidzo yekubatwa zvisina kufanira kwevakomana vane makore mashanu kusvika masere ekuzvarwa "mukuvhundutsa", asi izvi hazvina kuteedzerwa kana nemapurisa kana muchuchisi .
Kudzivirirwa kwevana mukireshi uye kuchikoro chepuraimari, nemitambo yakadai sa "Paws away" uye "Muviri wangu ndeangu", ndicho chinhu chatinonyanya kunetsekana nacho. Sangano rakazvimisikidzawo chinangwa chekutsigira vechidiki vakashungurudzwa uye kuvabatsira kuti vawane kodzero dzavo uye kuunza dzimwe nyaya dzekushungurudzwa kwevana kuti vanhu vazive zviri nani nezvekudzivirira kushungurudzwa kwevana. Iyo yekugara iri kugweta Markus Schmid muZurich. Iyo Zita shanduko yemubatanidzwa yakaitika muna Gumiguru 13.10.2020th, XNUMX.
Muvambi & Bhodhi revatungamiriri
Muvambi & Gweta
Zvemukati mewebhu & nhau